Cunista Kalluunka Oo ka Hortagta Xanuunka Xiiqda (Asmada) | Salaan Media
Copenhagen…..Ka hortago waxa uu ka fiican yahay Is-daweynta, waa murti ama weedh uu Isticmaalkeedu ku baahay dhinaca Caafimaadka. Waxa Dunidan aan ku noolahay ku soo batay Xanuunada jiitama ee loo caalwaayey, Sida Canser-ka Macaan-ka, xanuunada sigaarku sanbabada ku reebo, wadno xanuun-ka, Tuf-ta, Dhiig-karka iyo xanuuno kale. Haweenka Uurka lihi waa in ay ka feejignaadaan wax yaalaha ay cunayaan. Waxa la Ogaaday in cuntada ay cunto Qofka Dumarka ah ee Uurka lihi ay saamayn weyn ku yeelanayso caafimaadka ilmaheeda inta uu nool yahay oo dhan.
Cilmibaadhis cusub oo Khubaro Danish ahi ay sameeyeen ayaa muujinaysa, in cunista Dumarka uurka leh ee kalluunku ay ahmiyad weyn u leedahay halista ilmuhu ku qaadi karo cudurrada Xiiqda iyo Xasaasiyadda. Haddii hooyadu cunto kalluun badan, iyadoo raacaysa halbeegyada Khubaradaa Danish-ka ah, waxay xaaladdu u badan tahay, inay boqolkiiba 30 ku koobnaato halista ilmuhu ku qaadi karo cudurka Xiiqda, markuu 7 jir yahay, marka la barbardhigo hooyada uurka leh ee aan cunin kalluunka, ayuu yidhi Professor Sjurdur Frodi Olsen oo ka tirsan Machadka dawladda ee Serum.
Cilmibaadhis ballaadhan oo Khubaro Danish ahi Samaysay.
Tiro aan ka yarayn 70.000 oo dumar uur leh ayaa ka qaybqaatay cilmibaadhista, iyagoo buuxbuuxiyay shax-su’aaleed la xidhiidha cuntooyinka ay cunaan, taasoo socotay sannadihii u dhexeeyay 1996-2003.Tan iyo waagaas cilmibaadhayaasha ayaa la socday carruurta dhalatay, iyagoo hooyooyinka ka buuxinaya shax-su’aaleed la xidhiidha tusaale ahaan cudurrada diiwaangashan.
Arrintaasi waxay horseeday go’aan si fiican u qodobaysan oo la xidhiidha xidhiidha ka dhexeeya halista ilmuhu ugu jiro cudurrada Xiiqda iyo xasaasiyadda iyo cunitaanka hooyada ee kalluunka, intii ay uurka leedahay.
Kalluunka Shilis iyo ka Wayda ah labadaba.
Cilmibaadhayaashu toos u garan maayaan, sababta cunista kalluunku uga hortegayso cudurka Xiiqda. Laakiin waxa jira aragtiyo la xidhiidha, in asidha duxda omega-3 ay saamayso qaar ka mid ah maadaddaha jidhka ee la dagaallama xanuunada, Badi asidha duxda omega-3 ayaa laga helaa kalluunka shilis, waana ay fiican tahay in la cuno. Laakiin maaha in la cuno xaddi badan, sidaas awgeed waxa ka sii fiican cunista kalluunka wayda ah ee aan shishlayn oo faaido badan laga helo.
Dumarka uurka leh qaarkood ayaa ka baqda cunista kalluunka oo maqlay, in kalluunka uu ku jiro curiyaha khatarta ah ee la yidhaahdo Merkuri. Laakiin arrintaasi waxay ku kooban tahay kalluunka wayn ee soodhka leh ama waranka dheer Afka ku leh (Swordfish).
Afhayeenka Xisbiga Wadani Laantiisa Denmark.